Ukusebenzisana kwabahlali kwilayibrari yoluntu yasePrinceton, uMasipala wasePrinceton nasePrinceton kwiZikolo zikaRhulumente.
Imithetho yangoku kunye neengcebiso
Nika okanye Funa Uncedo
Ulwazi oluthe kratya nge-Vaccine
I-Pfizer Vaccine iyafumaneka kwi-Ages 16 kunye ne-17
ISebe lezeMpilo ePrinceton lisebenzisene nelokishi yaseHamilton, ilokishi yaseWest Windsor kunye neOlden Pharmacy ukubonelela ngeklinikhi yokugonya iPfizer kubantu abaneminyaka eli-16 neli-17 ubudala. Ukufaneleka kubandakanya: Abo bahlala, abaya esikolweni okanye abasebenza ePrinceton Abakafumani iyeza lokugonya le-COVID-19 (kwaye abanalo idinga okwangoku) Banakho ukuya […]
Funda ngakumbi: I-Pfizer Vaccine Iyafumaneka kwi-Ages 16 kunye ne-17
Impilo yasePrinceton, iQela le-YMCA ngo-Epreli 29 Iklinikhi yokuGonya
ISebe lezeMpilo ePrinceton liza kubamba iklinikhi yokugonya i-COVID-19 ePrinceton YMCA ngoLwesine, nge-Epreli 29 ukusuka nge-10 kusasa ukuya emini. Abantu abaneminyaka eli-18 nangaphezulu banokubhalisela ikliniki apha. Ubhaliso luya kuvalwa emva kokuba iidosi ezingama-80 zicwangcisiwe.
Funda ngakumbi: I-Princeton Health, iQela le-YMCA ngo-Epreli 29 Iklinikhi yokuGonya
Matshi 1 uhlaziyo lokugonya; kubize amavolontiya
U-Gwen Murphy ubhengeze namhlanje ukuba i-New Jersey izakufumana malunga ne-70,000 yeedosi zokugonya okusandula ukwamkelwa kwe-COVID-19 kule veki. Urhulumente uzandisile izikhokelo zokuba ngubani ofanelekileyo ukufumana isitofu sokuthintela Ukuqala ngomhla we-15 kweyoKwindla, la maqela alandelayo azakufanelekela isitofu sokugonya se-COVID-19: Ootitshala, kubandakanywa nabasebenzi benkxaso, kwi-Pre-K-12 […]
Funda ngakumbi: Matshi 1 uhlaziyo lokugonya; kubize amavolontiya
Ukuhlaziywa kokugonywa kweSebe lezeMpilo
Februwari 16, 2021
Okwangoku akukho zithuba zokuqeshwa kweedosi zokuqala ezifumaneka kwiSebe lezeMpilo lasePrinceton. Nceda ungafowuneli okanye uthumele i-imeyile ubuze malunga nokuqeshwa. Ukuba ucwangciselwe idosi yakho yesibini kunye neSebe lezeMpilo lasePrinceton, uyakufumana idosi yesibini kumhla obekiweyo wokuqeshwa. Unikezelo lwesitofu sokulwa lusasikelwe umda. IPrinceton […]
Funda ngakumbi: Ukuhlaziywa kokugonywa kweSebe lezeMpilo
I-County ibhengeza utshintsho kusasazo lokugonya
Februwari 11, 2021 Februwari 11, 2021
Icandelo lezeMpilo laseMercer County libhengeze ebutsheni bale veki ukuba lenze utshintsho kusasazo lokugonya olusekwe kumyalelo weSebe lezeMpilo laseNJ. Nceda ucofe apha uhlaziyo lwe-Vaccine kaFebruwari 10. ** Nceda uqaphele: Ukuba unedosi yesibini ehlelwe liSebe lezeMpilo ePrinceton, uyakufumana loo dose […]
Funda ngakumbi: Idolophu ibhengeza utshintsho kusasazo lonyango
Uhlaziyo lokugonya olungu-8 Feb.
Urhulumente wazise oomasipala baseMercer County ukuba ngeli xesha lokunqongophala kwesitofu sokugonya, akusayi kuphinda kubonelele ngezitofu zokugonya kwiiklinikhi zikamasipala. Ngenxa yoko, iiklinikhi ezigcinwe liSebe lezeMpilo lasePrinceton kunye namanye amasebe ezempilo kumasipala waseMercer County ziya kubanjwa okwexeshana ukuqala ngomhla kaFebruwari 13. Nje ukuba ukwanda konikezelo, umasipala […]
Funda ngakumbi: Februwari 8 uhlaziyo lokugonya
Ezakutshanje kugonyo oluvela kwiPhondo lasePrinceton lezeMpilo.
Funda ngakumbi: Okutsha kugonyo kwiPrinceton Health Dept.
Ukugonywa kuqala eMercer County
Ugonyo luqala eMercer County Kuninzi kakhulu kwiindaba malunga nenkqubo yokugonywa ukukhusela kwisifo se-COVID-19 kunye neenzame zasekuhlaleni zokuhambisa isitofu. Ukukhutshwa, kwisikali sikazwelonke kuye kwahlangabezana nothotho lokubonelela kunye neminye imiba yokuhamba, kodwa kwalapha, kwinqanaba lethu elincinci, izinto zihamba kakuhle. […]
Funda ngakumbi: Ukugonywa kuqala eMercer County
unokyankovid.org, Iqhayiya inikwe amandla yi WordPress.